Iindaba -Ukuguba komgangatho kubhekisa kunyango lokusila lwekhonkrithi / ilitye / iterrazzo / umhlaba we-epoxy
Ukusila komgangatho kubhekisa kunyango lokusila lwekhonkrithi / ilitye / itrazzo / epoxy yomhlaba, ethi ipolishe kakuhle iterrazzo, umphezulu wesamente, umaleko wodaka lwe-epoxy kunye nomhlaba omdala we-epoxy, njlnje ngoku ndisebenzise umzi-mveliso ngqo weHTC Diamond Ukugaya izihlangu zekhonkrithi kunye neTerrazzo Umgangatho Kwinqanaba lokuqala Ukusila okungalunganga, kwinkqubo yesayizi enkulu yamasuntswana eRhombus Amacandelo okuGaya izihlangu wokugaya entle, ipolishi kunye namanye amanyathelo.
Yenza umgangatho womgangatho ucoceke, uqaqambe, kwaye ubushelelezi, ngaloo ndlela uphucule ubuhle bomgangatho. Izixhobo zokugaya ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo zi-Floor grinding machine 490, umatshini wokucoca okuphezulu kunye nezinye izixhobo ezinxulumene noko.
Ngaba isebenza njani inkqubo yokugaya ibhloko yevenkile esebenza ngokubanzi?
1.Umphezulu wonyango: Sebenzisa i-grinder yedayimani engenathuli ukususa uthuli oludadayo kumphezulu wesamente kwaye wenze umphezulu ombi phezu komhlaba. Sebenzisa isicoci sokucoca isanti, ubutyobo kunye nothuli. Yomise indawo emanzi ngegesi okanye isomisi.
2. I-Primer: Beka i-arhente ephambili kunye ne-hardener yemathiriyeli ngokulinganayo, uyixube ngokupheleleyo nomxube, kwaye ngokulinganayo yambathise loo nto ngebrashi, ngebrashi yokuhambisa okanye umpu wokutshiza xa usetyenziselwa ukwenza ipeyinti yokuqala, kunye nokupeyinta ukulayishwa Ixesha lahlulwe ngaphezulu kweeyure ezisi-8.
3.Ukutyabeka okuphakathi: Thatha umyinge wobungakanani be-arhente ephambili kunye ne-hardener, uyixhokonxe ngokulinganayo ngomxube, emva koko ubeke i-quartz aggregate, ugxobhoze ngokulinganayo, sebenzisa i-trowel ukuthoba lo mxube ungasentla kwe-primer ngexesha elinokusetyenziswa , Ukuze imingxunya kunye neepeni ezigcweleyo zizaliswe.
4. Idyasi ephezulu: Emva kokuba intlaka yengubo yangaphakathi iqina, ukuba kukho amasuntswana ngaphezulu, kufuneka icolwe kuqala, kwaye imingxunya kufuneka igcwaliswe, emva koko uthathe umlinganiso wobungakanani bommeli ophambili kunye ne-hardener ukuvuseleleka ngokupheleleyo kwaye uxube, kwaye ulinganise idyasi eliphakathi ngetrowel. Kwangelo xesha, ngaphambi kokufaka isamente, iroli yenaliti isetyenziselwa ukuqengqeleka ngapha nangapha kudaka lwentlaka, ukwenzela ukuba umlinganiso usasazwe ngokulinganayo kwaye kususwe amaqamza omoya, ukuze umphezulu wentlaka ugude kwaye uqaqambe.
Inkqubo ipolishi ilitye: wokucoca ilitye yinkqubo ebalulekileyo yolondolozo lwamatye. Amanye amatye anokucocwa ngokuthe ngqo.
Eyona njongo ipholishi kukunyusa ukukhanya komhlaba. Wokucoca ilitye ngokubanzi lwenziwa ngokwenkqubo yokugaya erhabaxa → semi-ocoliweyo → ecoliweyo ukugaya → ecoliweyo ukugaya → wokucoca, kwaye amanye amanyathelo yokugaya erhabaxa kungenziwa ishiyiwe, ikakhulu ngokuxhomekeke ekubeni umphezulu ilitye yoqobo iye yenzeka unyango lokuqala.
GrCoarse yokugaya: Idiski yokugaya iyafuneka ukuthatha imela enzulu, ukusebenza kokugaya kuphezulu, ipeyinti yokugaya irhabaxa, kwaye umphezulu womhlaba urhabaxa. Isusa ikakhulu amanqaku esarha eshiyeke lilitye kwinkqubo edlulileyo kunye nokuguda kwelitye, umphezulu womzekelo ungumhlaba endaweni;
GrSemi-emihle ukugaya: susa umkhondo wokugaya okurhabaxa ukwenza imigca emitsha ecolekileyo, ukuze umphezulu welitye ugude kwaye uthambe;
GrUkugaya okufanelekileyo: Ipateni, amasuntswana kunye nombala wobuso belitye emva kokugaya okucacileyo kuboniswe ngokucacileyo, umphezulu ulungile kwaye ugudile, kwaye kukho ukubengezela okubuthathaka;
GrFine besila: Umphezulu ilitye emva ukugaya ngqo, ngaphandle umkhondo wamehlo ze. Umphezulu uyaguda, kwaye isilungiseleli seglosi sinokufikelela kwiidigri ezingama-55 okanye nangaphezulu;
Ishing wokucoca: Sebenzisa umatshini ezikhethekileyo wokucoca lenyengane lokusila ilitye ukusuka erhabaxa ukuya ilitye ocoliweyo ukusuka inombolo 50 ukuya ku-3000 ukwenza umhlaba eliqaqambileyo egudileyo entsha. Ilitye elikhazimlisiweyo likhazimla njengesipili, kwaye isicwebezelisi salo sinokufikelela ngaphezulu kweedigri ezingama-85. Ngokweentlobo ezahlukeneyo zamatye, kusetyenziswa iinkqubo ezahlukeneyo zokucoca.
1. Inkqubo wokucoca lenjongo tyaba: khangela imeko izinto-iglu yokulungisa-itsheki phambi kokuqala-phezulu ipleyiti-usike-ukuqala intloko nganye besila bejika-bagcine imeko ipolishi-nyenyisa ipolishi iparameters-yokomisa-waxing, Ukucoca -Ukuhlola-kwibhodi esezantsi yokupakisha.
2. Inkqubo yokugaya kunye neepolishi zepaneli ye-arc: jonga imeko yemeko-yokulungisa iglu-yokuhlola-yokuhlola-ibhodi ephezulu-jonga ngaphambi kokuqalisa-ukugaya-ukukhangela imeko yokugaya imeko-entle yokugaya-wokucoca-jonga imeko yebhodi esezantsi.
3. Inkqubo yokugaya kunye neepolishi zemigca emile okhethekileyo: jonga imeko yemathiriyeli-jonga ukuba ubume bemilo bufanelekile-zoba imigca yokujikeleza ngokungqinelana nethemplethi esemgangathweni yokugaya zombini iziphelo-ezirhabaxa zokugaya ukusuka kumacala omabini kuye wokugaya phakathi-ukusila-amanzi okusila imela 400 # Emva kokudibanisa-ukugaya kunye nokucoca-ukuhlolwa.